AHOANA NO FOMBA AHAFAHANA MANOVA NY INTERFACE VAOVAO AMIN'NY YANDEX - YANDEX - 2019
Manome sy manafoana ny interface vaovao amin'ny Yandex Browser
Matetika, rehefa miezaka mihazakazaka fandaharana na lalao ianao dia misy hafatra fa tsy hita ny rakitra shw32.dll. Tranobe fitantanana fitehirizana fahatsiarovana izay matetika ampiasain'ireo antontan-taratasy taloha navoaka alohan'ny 2008. Misy olana mitovy amin'izany amin'ny Windows rehetra.
Fanitsiana ny shw32.dll
Ny tsy fahampiana dia midika fa ny diso DLL dia napetraka diso, ka tokony hampidirina amin'ny rafitra indray. Sarobidy ihany koa ny fanamarinana ny karajatine manohitra ny virosy, satria ny sasany amin'izy ireo dia mihevitra fa ho virjiny io tahirin-kevitra tsy manjary io. Ankoatra izany, ilaina ny manampy azy amin'ny fanilihana rindrambaon-piarovana.
Hamerao ireo antontan-taratasy avy amin'ny tranokala antitra amin'ny fampiasana ny ohatra avast
Ahoana no ampidirana ny antontan-taratasy ho an'ny fisintonana Antivirus
Raha toa ka tsy ao anatin'ny programa fanoherana ny viriosy ny anton'ny olana, dia tsy afaka manao izany ianao raha tsy mametraka ny tranokala ilaina amin'ny anao.
Fomba 1: Mpanjifa DLL-Files.com
Ny fampiharana mpanjifa ny serivisy malaza DLL-Files.com dia iray amin'ireo vahaolana mahomby indrindra, satria miasa amin'ny fomba maody.
Sokafy ny fampiharana, ary midira ao amin'ny boaty fikarohana ny anaran'ny tranokala izay tadiavinao - shw32.dll - ary ampiasao ny bokotra fikarohana fikarohana.
Tsindrio ny vokatra hita - ny doka iray dia tsy misy afa-tsy amin'ny dikan-teny iray, ka tsy afaka mandeha ianao.
mpanao gazety "Install" - Ny programa dia hameno ny automatique ary hamindra ny DLL ilaina any amin'ny toerana mety.
Fomba 2: Fametrahana ny installer of shw32.dll
Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fomba amam-panao voalohany, dia azonao atao ny mamoaka dika mitovy amin'ny tranokala dynamique amin'ny solosaina ary mamaky azy ao amin'ny katalaoginao. Ho an'ny windows x86 (32 bit) dia hita aoC: Windows System32, ary ho an'ny 64-bit OS -C: Windows SysWOW64.
Mba hisorohana ny tsy fahazoan-dàlana, dia manolo-kevitra ny mamaky ny boky momba ny fametrahana ny solosaina DLL, ary koa ny torolàlana momba ny fisoratana ny tranokala voafidy ao amin'ny rafitra.
Ahoana ny fametrahana ny DLL amin'ny rafitra Windows
Manorata ny rakitra DLL ao amin'ny Windows OS
Izany dia mamintina ny fanadihadiana ny fomba fitsaboana amin'ny alàlan'ny tranokala dynamic shw32.dll.